भर्खरै विवाह गरेका अभिनेत्री काजल र व्यवसायी गौतमलाई हैरान पार्ने यो एक हर्कत ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/भर्खरै विवाह गरेका अभिनेत्री काजल र व्यवसायी गौतमलाई हैरान पार्ने यो एक हर्कत !
भर्खरै विवाह गरेका अभिनेत्री काजल र व्यवसायी गौतमलाई हैरान पार्ने यो एक हर्कत !
काठमाडौ । भर्खरै विवाह गरेकी अभिनेत्री काजल अग्रवाल र व्यवसायी गौतम किचलुले हैरान पार्ने हर्कत एक फ्यानले गरेकी छिन् । अक्टूबर ३० मा मुम्बईमा बिहे भयो । दम्पतीको परिवार र केही नजिकका साथीहरूले यस विवाह समारोहमा भाग लिन आएका थिए ।
यसै बीच, समाचार आएको छ कि काजलका एक फ्यानले उनको नामको ट्याटू बनाएकी छन् ।फ्यानले काजललाई उनको ट्विटर खातामा ट्याटूको फोटो साझा गरेर उनको विवाहको लागि बधाई पनि दिएकी छिन् । फ्यानले आफ्नो हातमा काजल नामको ट्याटू देखाउँदै फोटो पोस्ट गरेकी हुन् ।
उनले क्याप्शनमा लेखिन् ‘काजलका लागि यो विशेष दिन मात्र होइन, मेरो लागि पनि हो । शुभकामना विवाह काजल ।’ यो फ्यानको पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि काजल अग्रवालको विवाहका फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
अन्ततः राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गर्यो कक्षा १२ को परीक्षा हुने मिति , कहिले हुन्छ ?
घना जंगलको बिचमा यस्तो अवस्थामा फेला पर्यो ९ दिन देखि हराईरहेकी सुजिताको शव